Nkwa 5 usoro:
Imeghe na nkwa ịkwụwa aka ọtọ
Olọ ọrụ anyị jiri nlezianya na-ewulite nguzo nke otuto na njide onwe onye, ​​nke iwu na-agbasosi ike na nchedo ikike na ọdịmma ndị ahịa, na-arụ ọrụ dị mkpa nke ndị na-azụ ahịa, na-ekpughere nkwenye azụmaahịa na ezigbo okwukwe, na-enyere ndị aka na ntị aka. ogo nke ngwongwo na oru, ma na-egosiputa omume na omume ndi mmadu.
2.Ha hụ na ngwa ahịa dị mma, usoro ọrụ dị mma.Họpụta ndekọ ngwaahịa ma zụlite ọhaneze na aha ọma;
3. Anyị ga-emezigharị usoro sistemụ ịkọwapụta na ịkọwa akụkọ kwa afọ, ma melite njikwa akara akwụmụgwọ.
4.Che anya na owuwu nke iguzosi ike n'ezi ihe iji mee ka ọha na eze na ntuzi nke nchedo ikike ndị ahịa dị.
Nhiwe nke usoro nyocha na ntunye mmadu
1.Mmejupụta usoro nloghachi nke ndị ahịa, ngalaba ọrụ ndị ahịa na-eduzi nyocha nlele ahịa ndị ahịa oge niile, na-anakọta ihe ndị ahịa na ntinye, ma guzosie afọ ojuju ndị ahịa. Ọ bụrụ na achọta nsogbu, dozie ha n'oge, ma dozie mkpa ọfụma maka ndị ahịa na ndị ọrụ aka dị mkpa;
2.Anyị kwesịrị ị nabata nlebara anya nke ndị otu na echiche ọha, gee ntị na echiche na ntụnye nke ọha mmadụ, ma na-arụsi ọrụ ike na nyocha ndị mmadụ.
Nhazi usoro ngwaahịa na ọrụ dị mma traceability
Olọ ọrụ anyị na-ere ngwaahịa ahụ, na-eji nkwakọba ihe yana usoro njikwa ngwanrọ ahịa iji mee ka nkwenye ahụ dịkwuo, nyocha nyocha nke ọma site na nzọụkwụ nzọụkwụ iji gbochie ihe niile metụtara ogo ngwaahịa ọnọdụ ọ ga - eme;
Thelọ ọrụ ahụ nwere usoro ọrụ azụmaahịa zuru oke, guzosie usoro nke ijikwa nsogbu ngwaahịa ngwaahịa, wee mejupụta usoro njikwa nke mbu wee buru ibu ọrụ. Kpachara anya hụ na ngalaba niile so na sistemụ njikwa ahụ ga-agbanye faịlụ ahụ. na-edeba ọnọdụ na nyocha nsogbu dị n'ụdị ederede, wee kewaa ọrụ dị iche iche iji zere ịbịaghachi na nsogbu ndị ọzọ.
Mepụta usoro ịkwụ ụgwọ maka ịre ahịa
Olọ ọrụ anyị na-achịkwa njikwa nke usoro ịzụta ihe nke ọma, ma na-agwa ndị na-ebubata ya ihe na-egosi usoro dị mma na usoro gburugburu ebe obibi nke ndị ụlọ ọrụ anyị, ma na-ahọpụta ndị na-ebubata ya iji chịkwaa njikwa ngwaahịa sitere na isi iyi.
Sistemumazu nke 2.Supplier, nguzobe ihe nlere nke ihe nnabata, nyocha ulo oru, nnwale ahia, inyocha ngwa ahia.
Mepụta ịza ajụjụ
Olọ ọrụ anyị chepụtara usoro nyocha nke onwe ya, ngalaba ọ bụla guzobere usoro nlekọta nke ya, na-aga nyocha nke onwe ya na idozi onwe ya na nsogbu ahụ.
Thetù ndị na-azụ ahịa ga-agbakọ ma jide ngalaba dị mkpa ịza ajụjụ maka nsogbu ọ bụla bilitere.
Oge nzipu ozi: Mee-29-2020